ငါလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး | Martech Zone
သောကြာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 9, 2011 သောကြာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 9, 2011 Lavon ဘုရားကျောင်း
အားလပ်ရက်များ၌ဖြစ်ပျက်လာသောအခါလူများစွာကတစ်နေ့လျှင်တစ်နာရီလျှင်နာရီပေါင်းများစွာမည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်ဟုသင်ပြောနေသည်ကိုသင် ပို၍ ကြားရသည်။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်ပွားနိုင်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာနေရာနှစ်ခုမှာတစ်ချိန်တည်းမှာပြီးမြောက်အောင်မြင်ဖို့အများကြီးရနိုင်ပါတယ်။ စျေးကွက်သမားများနှင့်သူတို့၏အီးမေးလ်ပရိုဂရမ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့မည်သို့ခံစားရသည်ကိုအလားတူပြောဆိုနိုင်ပါသည် ကုမ္ပဏီအများစုသည်အီးမေးလ်စျေးကွက်တစ်ခုလုံး၏ဇိမ်ခံပစ္စည်းများမရှိကြပါ။ သူတို့၏အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးကိုစီမံရန်လူတစ် ဦး သို့မဟုတ်လူနှစ် ဦး ကိုမှီခိုရသည်။
စျေးကွက်သမားတွေကသူတို့ရဲ့အီးမေးလ်ပရိုဂရမ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာကိုပြောမယ့်အစားသင့်အစီအစဉ်ကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုလုံးရှိတယ်လို့ခံစားမိစေမယ့်အကြံဥာဏ် ၂ ခုပေးခွင့်ပြုပါရစေ။ ကုမ္ပဏီအများစုသည်အီးမေးလ်စျေးကွက်တစ်ခုလုံး၏ဇိမ်ခံပစ္စည်းများမရှိကြပါ။ သူတို့၏အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးကိုစီမံရန်လူတစ် ဦး သို့မဟုတ်လူနှစ် ဦး ကိုမှီခိုရသည်။
တက်ချိန်ညှိခြင်း စာပို့ပြက္ခဒိန်များ ဖွဲ့စည်းနေဖို့အလွန်ကြီးစွာသောလမ်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သင်တို့ကိုလည်းရှေ့ဆက်စီစဉ်ကူညီပေးသည်။ သင်သည်သင်၏ပရိသတ်ကိုပို့ချင်သလဲဆိုတာကိုမကြာခဏဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်ပြက္ခဒိန်ထဲမှာ၏မှတ်ချက်ပါစေ။ သင်တို့သည်လည်းအဖြစ်ဝေးသင်ကဲ့သို့ကောင်းစွာပေးပို့ခြင်းအပေါ်စီစဉ်ထားသောအရာကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုအဆုံးအဖြတ်အဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
templates & အကြောင်းအရာ Libraries သင်ထွက်ချထားနှင့်သင့်အကြောင်းအရာပြက္ခဒိန်အတွက်ဖွဲ့စည်းသတင်းအချက်အလက်များ ယူ. ဖန်တီးပြီးစတင်ရန်ခွင့်ပြုပါ။ သင်၏အားလပ်ချိန်များတွင်အနာဂတ်တွင်ထွက်ခွာသွားရန်စာပို့ခြင်းနှင့်အချိန်အတွက်အခက်အခဲရှိခြင်းတို့အတွက်လက်ငင်းရှိနေရန်တင်းပလိတ်များကိုဖန်တီးပါ။
autoresponder အလိုအလျှောက်အချို့သောဖြစ်ရပ်များတုံ့ပြန်ရန်ကို set up နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့မေးလ်စာရင်းတစ်စုံတစ်ဦးက subscribers လျှင်ဥပမာ, သင်သည်ထိုသူတို့ကကြိုဆိုသူတို့ကိုအရေးယူအခြားဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပေးပို့ပေးရန်အလိုအလျောက်အီးမေးလ်ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ပါ။
ထိပ်တန်း 20 စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Automation Solutions
9:2011 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 12, 08 တွင်
Great post, @lavon_temple: twitter! ဒီရက်သတ္တပတ်ကမနေ့ကဘယ်နေ့လဲဆိုတာကိုငါစာသားမေ့ခဲ့တဲ့အဲဒီရက်သတ္တပတ်တွေထဲကတစ်ခုပါ။ ယခုနှစ်ကုန်ခါနီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုဆိုးရွားသွားပုံရသည် - ကုမ္ပဏီများအားလုံးသည်သူတို့၏နှစ်ကုန်ထိတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများကိုဇန်နဝါရီလတွင်အရှိန်မြှင့်ရန်ကြိုးစားနေကြသည်။ wow ... ငါတို့နစ်နေပြီ
10:2011 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 2, 45 တွင်
ငါပြက္ခဒိန်မေးလ်၏စိတ်ကူးကိုချစ်၏။ သငျသညျအဆုံးစွန် lo-tech လမ်း (ကြီးမားတဲ့မြို့ရိုးပြက္ခဒိန်) တွင်ဤသို့ပြုလျှင်ပင်, ကသင်၏ပန်းကန်ကိုရှင်းလင်းခြင်းနှင့်အခြားအမှုအရာပေါ်တွင်သင်၏စိတ်ကိုရကူညီနိုင်သည်။